RetroArch ny emulator lalao rehetra-amin'ny-iray | Ubunlog
RetroArch front-end io miaraka amin'ny fampiharana libretro API mifantoka ho an'ny emulator, lalao ary lalao video, RetroArch mamela antsika handefa programa miova ho tranomboky libretro mampiasa interface isan-karazany an'ny mpampiasa toy ny interface line, GUI, fampidirana audio sy video, sivana audio, shaders, multi-pass, netplay, lalao rewind, cheats, sns.
Raha fintinina, RetroArch dia ho Kodi an'ny emulator, noho izany safidy tsara indrindra ny manana ny zavatra rehetra ho iray ary ambonin'izany rehetra izany dia mahafinaritra satria hampatsiahy anao ilay ampiasain'ny PS3 izy io.
RetroArch dia manana fanohanana gamepad maro be anisan'ny ahitantsika ireo malaza indrindra dia ny Xbox sy PS.
Ho ahy manokana, ity fampiharana ity dia tsara loatra, mba hahafahanao mamadika ny PC-nao taloha ho console video game retro.
1 Ahoana ny fametrahana RetroArch amin'ny Ubuntu?
2 Ahoana ny fomba handaminana ny RetroArch?
2.1 Mametraka ny fanohanana ny fifehezana XBOX 360
2.2 Fanamboarana ny sarintany fanalahidy
Ahoana ny fametrahana RetroArch amin'ny Ubuntu?
Afaka mametraka ity rindranasa ity amin'ny rafitray tsy maintsy ampiantsika ity tahiry manaraka ity:
ankehitriny manohy manavao ny lisitry ny tahiry izahay:
Finalmente mametraka ny fampiharana izahay:
ihany koa ilaina ny mametraka ny cores izany mba hahafahanao manatanteraka ireo lalao sintomintsika:
Ity dingana ity dia mety maharitra fotoana fohy, miankina amin'ny fifandraisanao amin'ny Internet izany satria 700 MB fotsiny ny cores.
Ao anatin'ireo cores (emulator) malaza indrindra dia ho hitanao:
Genesisy Plus GX
Manana maro hafa izy io, saingy ny tena fahita ihany, raha tsy misy bebe kokoa, dia mitoetra ho anao ihany no manararaotra an'ity programa lehibe ity.
Ahoana ny fomba handaminana ny RetroArch?
Na dia vitsy aza ireo mpampiasa no mitaraina satria manana safidy fikirakirana marobe ity rindranasa ity, saingy ny tsy firaharahiana, mora ny manamboatra ny hany zavatra tokony hitranga dia ny manomboka mizatra tsikelikely ny tenany amin'ilay rindranasa izy ireo.
Afaka mivezivezy eo anelanelan'ny safidy ny fampiasana ny totozy dia tsy ho mahafinaritra ao anatin'ny interface RetroArch, noho izany dia manoro hevitra anao aho tsy maintsy mampiasa ny lakilen'ny fitetezana eo amin'ny fitendry ianao, izay ipetrahanao miakatra sy midina hifindra eo amin'ny safidin'ny menio sy ankavia sy havanana hivezivezy eo amin'ny menus, mba hamerenana anao dia ataovy amin'ny bokotra Z sy ny lakile X hanaiky, raha manoratra ESC ianao dia hikatona ny fampiharana.
Ankehitriny ny dingana manaraka dia ny manamboatra ny mpanara-maso ny Lalao, raha ny ahy dia hamboariko ny maso XBOX 360.
Mametraka ny fanohanana ny fifehezana XBOX 360
Tsy maintsy ampifandraisintsika amin'ny solosaintsika izany ary tsy maintsy ekena ho azy izy io, satria ny ankamaroan'ny fizarana dia efa manana ny mpamily xpad Kernel, raha toa ka tsy ekena izany dia tsy maintsy ampidirintsika ny fanohanana ny rafitray.
Mba hanaovana izany dia tsy maintsy manokatra terminal isika ary manatanteraka ity baiko manaraka ity:
Raha tsy hita ilay fonosana, dia satria mampiasa kinova ianao alohan'ny Ubuntu 15.04 ka tsy maintsy ampidirinay ity repository manaraka ity:
Vantany vao vita izany dia tsy maintsy havaozintsika ny tahirintsika:
Farany dia apetrakay amin'ny:
Raha vantany vao vita ny fizotrany dia afaka mikaroka ilay rindranasa ao anaty menio fisoratana anarana izahay hahafahana mampandeha azy.
Raha vantany vao tafiditra ao amin'ny interface interface, araka ny nolazaiko, dia tsy maintsy mampiasa ny kitendry hivezivezy eo anelanelan'ny safidin'ny emulator isika.
Fanamboarana ny sarintany fanalahidy
Tsy maintsy mandeha amin'ireto lalana manaraka ireto isika, fanovana> fidirana.
Efa misy Ao anatin'ny menio dia ho hitantsika ireo safidy samihafa hahafahana manamboatra ny fanaraha-maso ao anatin'ny RetroArch, ny fanaraha-maso Izy ireo dia antsoina hoe Input User Binds, izay samy mifanitsy amin'ny fikirakira tsy miankina amin'ny baiko tsirairay, manana ny fahafaha-mandrindra hatramin'ny 6.
Izao satria mifandray ny lavitra XBOX anay mankany amin'ny Fidirana voalohany isika. Ao anatin'ireo safidy fanamboarana an'ity isika dia manana fomba roa hanaovana azy, na amin'ny tanana na amin'ny fanomezana tsirairay ao anatin'ny lisitra (manjavozavo loatra) na miaraka amin'ny fanampian'ny User 1 Bind All.
Mpampiasa 1 Mamatotra izay rehetra vita dia dingana kely amin'ny fanomezana ny sarintany ny lakile, ny anaran'ny bokotra, ny baiko na izay tadiavin'izy ireo hiantsoana hamboarina dia haseho eo amin'ny efijery ary tsy maintsy tsindrio fotsiny ny bokotra eo amin'ny sisin-tany lavitra ilaintsika fa tokony hampanaovina azy io asa io.
Nozaraiko ity sary manaraka hitako nanome anao hevitra momba ny filamatra ity, tsy misy dikany ny manoratra ao an-trano, fa ny fijerena fotsiny ny anaran'ny lakile hita eo amin'ny efijery sy hamantarana hoe homenao ny baikonao.
Farany, Mijanona ho anao fotsiny ny mahita ny ROMS hanombohana mankafy azy ireo ao RetroArchTsy maintsy mamono azy ireo fotsiny ianao amin'ny safidin'ny Load Content ary avy eo misafidy ny fototra ampiasana azy.
Raha mahafantatra programa hafa mitovy amin'ny RetroArch ianao dia aza misalasala mizara izany aminay amin'ny fanehoan-kevitra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: ubunlog » Ubuntu » Games » RetroArch ny emulator lalao rehetra-amin'ny-iray
Tetelx dia hoy izy:
Ity ve no emulator tsara indrindra hampiasana ny lalao amin'ny sehatra PlayStation1, 2, 3, 4 ????
Ity no sehatra ampiasaiko ...
Misaotra amin'ny torohevitra…
Mamaly an'i Tetelx
Editor Komodo, apetraho ao amin'ny Ubuntu ity editor kaody maimaimpoana ity